Xawaare - Wikipedia
Kani waa maqaal ku saabsan Halbeega awooda socota. adeegsi kale, eeg Xawaare (faah faahin).
Xawaare (; ) waa halbeegga lagu ogaado orodka awoodda socota ee shay, aalad ama walax ku socoto waqti kooban gudaheed. Si la mid ah halbeegyada dhererka, balaca iyo jooga ayaa masaafada xawaaraha loo qeybiyaa waqtiga.
Xawaaraha gaadiidka waxaa lagu qiyaasaa kilomitir/saacad.
Astaanta Nidaamka Caalamiga ee Halbeega Dunida ee xawaaruhu waa mitir/ilbiriqsi ama (m/s). Sidoo kale waxaa la isticmaalaa kilomitir/saacad ama (km/h), iyo dalalka qaar sida Maraykanka waa mayl/saacad (mi/h).
Inta la ogyahay, xawaaraha ugu dheereeya ee awood ama shay kale ku socon karo waa Xawaaraha Ileyska kaas oo la mid ah 299,792,458 mitir ilbiriqsigiiba (m/s), taas oo qiyaas ahaan u dhiganta 1079 milyan kilomitir saacadiiba ama (671,000,000 mph).
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xawaare&oldid=150702"
Last edited on 14 Diseembar 2015, at 01:42
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Diseembar 2015, marka ee eheed 01:42.